२० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास यो ४ बर्षमा भएको छ – गाउँपालिका अध्यक्ष कुर्मी – BikashNews
२० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास यो ४ बर्षमा भएको छ – गाउँपालिका अध्यक्ष कुर्मी
२०७८ भदौ २९ गते २२:०६ विकासन्युज
मायादेवी गाउँपालिका लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गत कपिलवस्तु जिल्लामा पर्छ । यस गाउँपालिकाका अध्यक्ष बजरंगी प्रसाद कुर्मी हुन् । उनी अध्यक्षको रूपमा निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पूरा भएको छ । यो अवधिमा सामाजिक, आर्थिक तथा शैक्षिक क्षेत्रमा पालिकाले निक्कै प्रगति गरेको उनी दाबी गर्छन् । भौतिक पूर्वाधार विकाससँगै गाउँवासीलाई आत्मनिर्भर बनाउने नीति लिएको पनि अध्यक्ष कुर्मी बताउँछन् । यसैक्रममा गाउँपालिकाले अघि सारेका आर्थिक विकासको रणनीति, त्यहाँ गरिएका विकास निर्माणका काम, सम्भावना, चुनौती लगायत विषयमा केन्द्रित रहेर उनै अध्यक्ष कुर्मीसँग विकासन्युजका लागि राजिव न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
स्थानीय सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नुभएको ४ वर्ष पुरा भयो, मायादेवी गाउँपालिकाको मुहार कत्तिको फेरियो होला त ?
नयाँ संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको चुनाव भएको ४ वर्ष पुरा भएको छ । पालिकाको पहिलाको अवस्था निकै जीर्ण थियो । २० वर्षको समयसम्म जनप्रतिनिधिविहीन भइरहेको अवस्थामा नेपालको संविधान २०७२ मा भएको व्यवस्थाअनुसार प्रथम पटक संघीयताको कार्यान्वयनसँगै स्थानीयतहको चुनावमार्फत हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आयौं । निर्वाचित भएर आइसकेपछि संघियताको मर्म र भावनालाई मध्यनजर गर्दै विकास निर्माणको कामहरू अगाडि बढाएका छौं । विगतमा जनताहरूले खेपेको सास्ती अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन पछि अन्त्य भइसकेको छ । हाल पालिकाको धेरै क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन आएको छ । जनताको नजिकैको वा नागरिकको घर आँगनको सरकार स्थानीय तह हो । त्यसैले जनताको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै अगाडि बढेका छौं ।
पालिकाले प्रदेश र केन्द्र सरकारसँग मिलेर बहुबर्षी योजनाहरू पनि अगाडि बढाएको छ । कतिपय योजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा पनि छन् । सडकको कुरा गर्दा पालिकाको प्रत्येक वडामा सडकको पहुँच पुर्याएका छौं । सडकको स्तारोन्न्ती गर्ने तथा कालोपत्रे गर्ने काम पनि भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रतर्फ पनि धेरै कामहरू गरेका छौं । विद्यालयका न्यूनतम भौतिक संरचनाहरू निर्माण गरी शैक्षिक गुणस्तरमा विशेष जोड दिएका छौं भने पालिकाको शैक्षिक स्तर धेरै माथि पुगेको छ । हामीले स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि उत्कृष्ट कामहरू गरेका छौं । नागरिकलाई स्वास्थ्य संस्थासम्म जनाको लागि प्रत्येक ठाउँमा एम्बुलेन्सको व्यवस्था गरेका छौं । स्वास्थ्य संस्थाको सुधिरिकरण गरी त्यहाँको सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त बनाउने काम समेत भएको छ । पालिकाको प्रत्येक वडामा प्रजनन् केन्द्र समेत रहेका छन् ।
पालिकामा खानेपानीको चरम अभाव थियो । खानेपानीको समस्यालाई समाधान गर्ने प्रदेश र केन्द्र सरकारसँगको साझोदारीमा पालिकाले ‘एक घर एक धारा’ खानेपानी अभियान सञ्चालन गरेको छ । जस अन्तर्गत हामीले हलसम्म धेरैको घरमा खानेपानी पुर्याई सकेका छौं । पालिका सम्पूर्ण नागरिकको घरमा खानेपानी पुर्याउने हाम्रा लक्ष्य छ । हामीले एक मात्र क्षेत्रमा नभई समग्र पालिकाको विकास निर्माणको काममा लागेका छौं । सिचाईका कामहरू पनि अगाडि बढाएका छौं ।
कृषि क्षेत्रमा पनि पालिकाकोतर्फबाट धेरै कामहरू भएका छन् । नागरिकको आय आर्जनको मुख्य स्रोत कृषि हो । गाउँपालिकाले कृषिका विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गर्दै आएका छौं । जस अन्तर्गत प्लास्टिकमा तरकारी खेती, व्यवसायिक किसानलाई तालिमहरू दिने, गोष्ठी गर्ने गरेर उहाँहरूलाई कृषिमा उत्प्रेरणा गर्ने र प्रोत्साहित गर्ने पनि गर्दै आएका छौं । किसानहरूको माग अनुसार सेवा गरिरहेका छौं । हाम्रो पालिकाको प्रत्येक वडामा कृषि प्राविधिकहरू हुनुहुन्छ । उहाँहरूले कृषिमा आएको समस्यालाई समाधान गर्न र सेवालाई निरन्तरता दिनको लागि प्राविधिकहरूले हरेक ठाउँमा गएर सेवाहरू दिने गरेका छन् । उनीहरूले कृषिमा लागेका रोगको समाधान गर्ने काम गर्दै आउनु भएको छ । पालिकामा ८९ प्रतिशत नागरिकहरुले कृषि पेशा अँगालेको पाइन्छ । किसानहरूलाई ५० प्रतिशत अनुदानमा बिउ विजन वितरण गर्दै पनि आएका छन् ।
स्वभाविकरूपले काम गर्दैगर्दा समस्याहरू आउँछन् नै । यो भनेको जनप्रतिनिधिमूलक संस्था भएकाले यहाँ, राजनैतिक विषय जस्ता अन्य विषय पनि आउन सक्छन् । चुनौतीलाई समाधान गरी नै हामी अगाडि बढेका छौं । चुनौती आयो भनेर दबाउने होइन, कसरी यसलाई समाधान गर्ने र सरलीकृत तरीकाले अगाडि बढेका छौं । चुनैतिको समाधान गरी पालिकामा विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिएका छौं । हामी गाउँगाउँमा पुगरे स्थानीय तहको अनुभूति नागरिकलाई दिन सफल भएका छौं ।
हामी त अहिलेसम्मको काम गराईबाट सन्तुष्ट नै छौं । पालिकामा भएका विकास निर्माण पनि उपलब्धि मूलक नै छन् । ३० वर्षसम्म नभएका विकास यो ४ सालमा भएको छ । स्रोत साधनाको भरपुर उपयोग गरी पालिकाको विकास निर्माणको काम गरेका छौं । म मात्र नभई हाम्रो कामबाट पालिकाको नागरिकहरू पनि खुसी र सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने आशा छ । हामीले सिंहदरवारको अधिकार नागरिकको घरघरमा पुर्याएका छौं ।
स्थानीय तहको संरचना बनि सकेपछि चुनावको बेला घोषणापत्र लिएर नागरिकको घर आगनमा गएका थियौं । यो ५ वर्षको अवधिमा गर्न सक्ने कामकोहरु घोषपत्रमा उल्लेख गरेको थियौं । त्यही अनुरुप नै पालिकामा विकास कामहरू अगाडि बढाएका छौं । चुनावी प्रतिबद्धता पूरा गर्न हामी सदैव लागिरहेका छौं । निर्वाचनमा जनतामाझ गरिएका ८० प्रतिशत प्रतिबद्धता पूरा गरेका छौं । नयाँ कार्यहरू पनि गरेका छौं । समग्रमा हामीले आफ्नो स्रोत र साधनले भ्याएसम्मको सबै कार्य गरेका छौं । पालिका भएको विकास निर्माणको काममा उत्कृष्ट नै छ । २० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास यो ४ बर्ष भित्रमा भएका छ् ।
हामीले सञ्चालन गरेका तर पुरा नभएका योजनाहरूलाई पुरा गर्ने पनि हाम्रो लक्ष्य छ । गाउँपालिका भित्र जनताको जीवनस्तर उकास्न आयआर्जनमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि हाम्रो प्रमुख योजना छ ।
यस महामारीको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि पालिकाले सक्दो प्रयास गरी रहेको छ भने प्रभावकारी कदम पनि चालेका छौं । गाउँपालिकाले जब कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरुभयो, लगत्तै हामीले क्वारेन्टाइन, आइसोलेसन व्यवस्थापनदेखि नगारिकहरुलाई यातायातको व्यवस्थासँगै जनचेतनाका कार्यक्रम गर्यौं । स्वास्थ्य क्षेत्रमा केही पूर्वाधार निर्माण तथा जनशक्ति व्यवस्थापन गरेसँगै कोरोना अस्पताल सञ्चालनमा ल्याएका छौं ।
कोरोनाको दोस्रो लहर पालिकामा फैलिएसँगै हामी कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्नको लागि अहोरात्र खटेर काम गर्यौं । पहिलाको तुलनामा पालिकामा संक्रमण दर घटे पनि संक्रमण बढ्न सक्ने जोखिम भने उच्च नै छ । पालिकामा सबैको सहयोगमा कोरोना रोकथाम र नियन्त्रण गर्न सकिएको छ । पालिकामा हालसम्म २ सय भन्दा बढिमा संक्रमणको पुष्टि भएको छ ।
अब, अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ ?
विकास निर्माणको व्यापक कामहरु गरेर नागरिकलाई समृद्ध बनाउन हामी लागि परेका छौं । सुन्दर र समृद्ध गाउँपालिका निर्माण गर्न जनप्रतिनिधिको सक्रियतासँगै आम नागरिकको साथ र सहयोग पनि उत्तिकै आवश्यक छ । हामी नागरिकको सेवाका लागि सधैं तत्पर छौं ।
One comment on "२० वर्षसम्म हुन नसकेको विकास यो ४ बर्षमा भएको छ – गाउँपालिका अध्यक्ष कुर्मी"
Thanks for publishing such great news. we are the citizen of this nation and hope the development of the whole country, through the development of the local goverment. Mr. kurmi is the young leader and big visionary person.If he will got the further opportunity to serve the local citizen ,no doubt surely he should do the best.And i hope he will get the chance………..good luck for him.